UYIHLELA NJANI IFAYILE YEMIKHOSI NGAPHAKATHI WINDOWS 10 [ISIKHOKELO] - ITHAMBILE
Uyihlela njani ifayile yemikhosi ngaphakathi Windows 10 [ISIKHOKELO]
Uyihlela njani iFayile yemikhosi ngaphakathi Windows 10: Ifayile 'yemikhosi' yifayile yokubhaliweyo ecacileyo, ebonisa iimephu zamagama ehostele kwiidilesi ze-IP. Ifayile yokubamba inceda ekujonganeni neendawo zenethiwekhi kwinethiwekhi yekhompyuter. Igama lenginginya ligama elinobuntu okanye ileyibhile enikezelwe kwisixhobo (umphathi) kwinethiwekhi kwaye isetyenziselwa ukwahlula isixhobo esinye kwesinye kwinethiwekhi ethile okanye kwi-intanethi. Ukufumana umphathi kwi-IP yenethiwekhi, sidinga idilesi ye-IP. Ifayile yenginginya isebenza ngokuthelekisa ilebheli yomamkeli nedilesi yayo ye-IP.
Kutheni le nto ifayile yenginginya ifuneka kwikhompyuter yakho?
Ungayiguqula njani imikhosi kwifayile yakho?
Uyihlela njani iFayile yemikhosi ngaphakathi Windows 10
Hlela iFayile yeMikhosi kwiWindows 8 nakwiWindows 10
Hlela iFayile yeMikhosi kwiWindows 7 kunye neVista
Hlela iFayile yeMikhosi kwiWindows NT, Windows 2000, nakwiWindows XP
Hlela iFayile yeMikhosi usebenzisa iiNkqubo zoMntu weSithathu
Uyikhusela njani ifayile yakho yokubamba?
Inkqubo ye- www.google.com Sisebenzisa, umzekelo, ligama lenginginya esilisebenzisayo ukufikelela kule ndawo. Kodwa kwinethiwekhi, iisayithi zibekwe kusetyenziswa iidilesi zamanani ezinje nge8.8.8.8 ezibizwa ngokuba ziidilesi ze-IP. Amagama eehostele asetyenziswa kuba akunakwenzeka ukuba zikhumbule iidilesi ze-IP zazo zonke iisayithi. Ke, nangaliphi na ixesha uchwetheza naliphi na igama lenginginya kwisikhangeli sakho, ifayile yenginginya iqala ukusetyenziselwa ukwenza imephu kwidilesi ye-IP emva koko indawo iyafumaneka. Ukuba eli gama lenginginya alinayo imephu kwifayile yenginginya, ikhompyuter yakho ilanda idilesi ye-IP kwiseva ye-DNS (igama lesizinda). Ukuba nefayile yenginginya kulinciphisa ixesha elisetyenziselwa ukubuza i-DNS kwaye ifumane impendulo ngalo lonke ixesha kufikelelwa kwisiza. Kwakhona, iimephu eziqulethwe yifayile yokubamba ngaphezulu kwedatha efunyenwe kwiserver ye-DNS.
Ukuhlela ifayile yokubamba kunokwenzeka kwaye unokufuna ukuyenza ngenxa yezizathu ezahlukeneyo.
Ifayile yokubamba ibekwe apha C: Windows system32 abaqhubi njl kwikhompyuter yakho. Kuba yifayile yokubhaliweyo ecacileyo, inokuvulwa kwaye ihlelwe kwincwadana yokubhala . Ke ngaphandle kokuchitha ixesha masibone Uyihlela njani iFayile yemikhosi ngaphakathi Windows 10 ngoncedo lwesifundo esidweliswe apha ngezantsi.
1. Cinezela iWindows Key + S ukuzisa ibhokisi yokukhangela yeWindows.
2. Chwetheza incwadana nakwiziphumo zokukhangela, uya kubona i- indlela emfutshane yeencwadana.
Cofa ekunene kwi-Notepad kwaye ukhethe ' Sebenzisa njengomlawuli ’Kwimenyu yentsingiselo.
4. Ukukhawuleza kuya kuvela. Khetha Ewe ukuqhubeka.
5. Iwindow yokubhalela iya kuvela. Khetha Ifayile ukhetho kwiMenyu kwaye ucofe ku ' Vula '.
6. Ukuvula ifayile yenginginya, khangela ku C: Windows system32 abaqhubi njl.
7. Ukuba awukwazi ukubona ifayile yenginginya kule folda, khetha ' Zonke iifayile ’Kukhetho olungezantsi.
8. Khetha ifayile ye inginginya ifayile kwaye ucofe ku Vula.
9. Ngoku ungayibona imixholo kwifayile yenginginya.
Guqula kancinane okanye wenze utshintsho olufunekayo kwifayile yenginginya.
ibar yomsebenzi engasebenziyo windows 10 emva kohlaziyo
11. Ukusuka kwimenyu yokubhalela incwadana uye kwi Ifayile> Gcina okanye cinezela Ctrl + S ukugcina utshintsho.
Phawula: Ukuba uyivulile incwadana ngaphandle kokukhetha ' Sebenzisa njengomlawuli ’, Ngewufumene umyalezo wempazamo onje:
Hlela iFayile yeMikhosi o n Windows 7 kunye neVista
Hlela iFayile yeMikhosi o n Windows NT, Windows 2000, kunye neWindows XP
Kwifayile yenginginya, umgca ngamnye unendawo yokungena enye ebonisa iimephu zedilesi ye-IP kwigama elinye okanye amagama amaninzi. Kumgca ngamnye, idilesi ye-IP iza kuqala, emva koko ilandelwe sithuba okanye uphawu lwethebhu kunye negama lenginginya. Masithi ufuna i-xyz.com yalathe ku-10.9.8.7, uza kubhala u-'10 .9.8.7 xyz.com 'kumgca omtsha wefayile.
Indlela elula yokuhlela ifayile yenginginya kukusebenzisa izicelo zomntu wesithathu ezikunika izinto ezinje ngokuthintela iisayithi, ukuhlela amangeniso, njl njl.
Unokulawula ngokulula ifayile yakho yokubamba ngale software. Ngaphandle kokuhlela ifayile yenginginya, unokuziphindaphinda, usebenze, ukhubaze ungeniso olunye nangaphezulu ngexesha, ucofe kwaye uhlele amangeniso, kugcino kunye nokubuyisela ulungelelwaniso lweefayile zemikhosi eyahlukeneyo, njl.
Inika ujongano lwetheyibhile kuwo onke amangeniso kwifayile yakho yokubamba, eneekholamu zedilesi ye-IP, igama lenginginya kunye nezimvo. Unokwenza okanye ukhubaze yonke ifayile yenginginya ngokunqakraza kwi-icon yoMgcini weFayile yoMhleli kwisaziso.
IHostMan sesinye isicelo simahla esikuvumela ukuba ulawule iifayile zakho zemikhosi ngokulula. Iimpawu zayo zibandakanya eyakhelwe-ngaphakathi imvuselelo yefayile, ukwenza okanye ukukhubaza inginginya ifayile, Skena imikhosi yeempazamo, ukuphinda kabini kunye nokuqhekeka okunokwenzeka, njl.
Uyikhusela njani eyakho imikhosi ifayile?
Ngamanye amaxesha, isoftware enobungozi isebenzisa ifayile yokubamba ukuze ikuthumele kwindawo engakhuselekanga, engafunekiyo equlathe izinto ezinobungozi. Ifayile yokubamba inokwenzakaliswa ziiVirus, Spyware okanye iTrojans. Ukuze ukhusele ifayile yakho yokubamba ukuba ingahlelwa sisoftware enobungozi,
1 yiya kwifolda C: Windows system32 abaqhubi njl.
2, cofa ekunene kwifayile yokubamba uze ukhethe iipropathi.
3.Khetha uphawu 'lokufunda kuphela' kwaye ucofe ku Faka.
Ngoku unokuhlela iifayile zakho zokubamba, uvimbe iintengiso, wenze iindlela ezimfutshane, unike imimandla yendawo kwiikhompyuter zakho, njl.
Ndiyathemba ukuba la manyathelo angentla ayeluncedo kwaye ngoku ngokulula Hlela iFayile yemikhosi ngaphakathi Windows 10 kodwa ukuba usenayo nayiphi na imibuzo malunga nesi sikhokelo uzive ukhululekile ukubabuza kwicandelo lamagqabaza.
iiwindows 8 zixhomekeke kulwamkelo
windows i-10 isezantsi kwimemori
Usb ayisebenzi emva kohlaziyo lweWindows
i-itunes ayinakunxibelelana nale iphone 0xe800000a
umqhubi ugqithisile kwisitaki se-buffer win 10